पोष्टपोषण के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki पूरक वित्त
पोष्टपोषण के हो?
मर्न पूरक वित्त विशेष गरी घर निर्माणकर्ताहरूलाई असर गर्छ। निर्माण चरणको सुरुवातमा, वा सम्भवतः वास्तविक योजना भन्दा पहिले, उनीहरूले भविष्यको घरको लागि मात्र एक अर्का ऋण लिने गरेका थिए। अब यो व्यक्तिगत निर्माण चरणहरू हुन सक्दछ कि पैसा सजिलै बस बाहिर जान्छ किनभने सामग्री गलत रूपमा गणना गरिएको छ वा अर्को कारण भयो। त्यसो भए यस अवस्थामा, एक थप वित्त पोषण बैंकबाट अनुरोध गर्नु पर्छ। अधिकांश बिल्डर्सहरूको लागि यो समस्या होइन। जो पनि एक घर निर्माण गर्दछ निश्चित रूप देखि वित्तीय स्रोतहरु मा हात मा छैन र त्यस पछि पछि फेरि पैसा को लागी आवेदन गर्नु पर्छ। जब यो हुन्छ, अधिकांश मानिसहरू वित्तीय समस्याको सामना गर्छन्।
किनकि बैंकले पनि क्रस गर्न सक्दछ र पछिको वित्तपोषण प्रदान गर्न अस्वीकार गर्दछ। बिल्डरहरू कर्तव्यमा छन् र बताउँछन् कि ऋणबाट पहिलो पैसाको साथ के हुन्छ। सबै खर्चहरू सधैं उपयुक्त कागजातहरूसँग साबित हुनुपर्छ। उधारकर्ताहरूले कुनै पनि समयमा पूरै अनुदानको लागि आवेदन गर्न सक्छन्। चाहे यो अन्ततः दिईएको बैंकको हातमा छ। रद्द हुनको लागी यो थप दोस्रो ऋण अनुरोध गर्न आवश्यक हुन सक्छ। आज यो सबै हो। तर दुर्भाग्यवश, यो संधै धेरै प्रयास संग जुडा छ। पोष्ट फाइनान्सिंगको चाँडै नै लागू गर्न अनिवार्य छ। यदि यो धेरै ढिलाइ भयो र निर्माण सामग्री अब भुक्तानी गर्न सकिँदैन, त्यसपछि यो ठूलो कष्टप्रद आउछ। यो यथार्थसम्म टाढा हुनु पर्छ। आज, अधिकांश व्यक्ति सबै परेशानीबाट बचाउन उत्सुक छ र यी मानिसहरू बस मद्दत चाहन्छन्। तिनीहरू आफ्नो परियोजनाको साथ तयार हुन चाहन्छन्।
बैंकसँग सञ्चार महत्त्वपूर्ण छ
यदि तपाईसँग समस्या छ भने तपाईले चाँडै नै तपाइँको बैंकलाई सम्पर्क गर्नु पर्छ। बैंकका कर्मचारीहरू तपाइँको सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्षम हुनेछन्। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं चाँडै अघि बढ्नुहुनेछ। मद्दत आज महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र धेरै बिल्डर्सहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। सुरुदेखि, तपाइँलाई कुनैपनि अतिरिक्त अनुदानबाट जोगिनको लागि ध्यान दिनु पर्छ। तपाईलाई थाहा छ कि यो केवल एक शुद्ध बारेमा होइन ऋण रकम तर चासो तपाईं मा पनि छ। सामान्यतया लामो समयसम्म विस्तार विस्तार छैन। दर समायोजन र आपातकालीन मा वृद्धि भएको छ। तर यो पनि एक हानि हुन सक्छ। किनभने यदि तपाईंले पहिले नै पोष्ट पोषण गर्नु अघि किन्डिन्डिङहरू तिर्न सक्नुहुन्न भने, त्यस पछि फाइनान्सिङको साथमा सुधार हुँदैन। तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ कि यदि तपाईले यो खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैपनि अवस्थामा, तपाईंले बैंकमा व्यक्तिगत भ्रमण गर्नुपर्दछ। यसले तपाईंलाई आफैले सुरक्षित गर्न र सुरूबाट थाहा पाउदछ कि काम गर्दछ। कुनैपनि अवस्थामा, तपाईंले निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाइँ आफ्नो बैंक सल्लाहकार संग नियुक्ति गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। पछाडि वित्तपोषण को लागी जो कोहीले यसलाई बैंकमा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो सामान्यतया राम्रो तरिकाले गरिन्छ, किनकि तपाइँ त्यहाँ त्यहाँ सबै कागजातहरू पेस गर्न छैन। यद्यपि, यो पनि यसको खाता हो। किनभने यी मानिसहरू पूर्णतया निश्चित हुन चाहन्छन कि उनीहरूको पैसा पनि खर्चिएको छ र यो पनि निश्चित रूपमा तिर्नुभएको छ। त्यसैले तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाई राम्रो सल्लाहकारमा उड्नु भएको छ। तपाईं पत्ता लगाउने सक्षम छैन कि पुन: फिर्ती गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले तपाईं धैर्य हुनु पर्छ।
अघिल्लो लेखकल क्रेडिट
अर्को लेखभाग विनिमय